July 23, 2021 Xuseen 10
Ra’iisulwasaaraha XFS oo ka jawaabaya tallaabadii muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde,ayaa xilka ka qaaday Agaasimihii Shaqaalaha hay’adda NISA Cabdullaahi Kullane & taliyihii Nabad Sugidda ee groonka Aadan Cadde Cabdiwahaab Sh Cali.
Dhanka kalena, Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu amar ku bixiyay in dhammaan muwaadiniinta aan laga horjoogsan karin Garoonka Aadan Cadde iyo guud ahaan Soomaaliya.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macaliow ayaa Saaka mar kale loo diiday in uu ka dhoofo garoonka diyaaraddaha ee magaalada Muqdisho xilli uu kusii jeeday degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo, wuxuuna xusay inay tahay markii afraad ee loo diido garoonka, islamarkaana falkaasi ay ka dambeeyaan Farmaajo iyo taliye ku xigeenka hay’adda nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Cabdullaahi Kulane.
@@@ Casilaadda Kullane-jiis / sharkaroortii hoobashada Farmaajo iyo hinqashada Somalia
Kullane-jiis: cumbuq cumbuq … dhurruq-dhaylo xaar-dhamiijo. Kaaga darane, ma haysto geed uu sida dhurwaaga ku marto lugta milifta ah.
Ra’iisalwasaare Rooble maanta ayuu balagta iska gooyey; maanta ayuu muujiyey in dhiig reer Mudug ku jiro.
Marka tobannaan rag iyo dumar ah oo Mareexaan ah loo diiday — qaarkood sanooyin — inay booqdaan dadkoodii iyo degaankoodii si aysan saamayn ugu yeelan doorashada xildhibaannada Gedo, maxaad ka filanaysaa in Soomaalida kale wajihi doonaan. Toloow, Kullane-jiis wax ma ka xusuustaa wixii Xamar ka dhacay January 1991, xaggeese ku noolaa 30kii sano ee tegay?
Rooble wuxuu qaaday tallaabadii ugu horreeysay ee lagu badbaadinayo wadajirka iyo mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Waxaan ka sugeynaa hadda kadib waa inuu meel saaro dhallinyaradii xaabo ahaanta loogu shiday dagaalka Tigray, iyo inuu ama maxkamad keeno ama xabsiga ka siidaayo Sh. Mukhataar Roobow.
Waa tallaabo wamaagsan oo uu Raysalwasaare Rooble xagga sarreynta sharciga u qaaday. Laakiin arrintan uu ninka Kulane jiis la baxay dadka Airport ka kaga celinayo aabbaheed iyo hooyadeedba waa Farmaajo ee isaga runta ha loo sheego!
Qofka xil qaran oo markii horeba si nin jehleeysi ah loogu dhiibay haddii uu si xun u isticmaalo oo uu is moodo in uu sharciga ka sarreeyo, waa in kan uu yahay la tusaa oo dadka laga qabto.
shankaroor = xabbadda rasaasta ee dagaalka lagu bilaabo
Isbaaradii hawada la isu dhigan jiray miyaa la isaga daba yimiday?!
Waa hanbalyeehaynaa tallaabada uu qaaday wasiirka koowaad, ee dadka dhaqdhaqaaqooda loogu oggolaanayo. Laakiin su’aasha taagani waxa weeye, wasiirka koowaad ma inta villada la joogta uunbuu xukunkiisu qabtaa? Waayo markii shaqsiga murashaxa ah iyo diyaaraddii uusaarnaaba laga soo celinayey Kismaanyo, wasiirka koowaad waxa uu ku sugnaa Kismaanyo laftigeeda, kamana uusan hadlin iska daa dad uu xilka ka qaada e!
Sidaa si le’eg, wasiirka koowaad xukunkiisu ma gaarsiisanyahay Garoowe & Kismaanyo? Mase xakamayn karaa habdhaqanka gurracan ee Deni & Madoobe? Jawaabtu saw maya maaha? Hadduusan haddaba xukunkiisu dadka wada simi karin, awood fulin la’aan awgeed, waxaa ka habboonayd in uu si kale bahasha u dhigo. Hadda waxa ay u muuqataa in isle’egtu aysan miisaannayn, oo uu dheeli ku jiro.
Gunaanadkii, waa u hanbalyeeynayaa wasiirka koowaad, oo qaaday tallaabo loo baahnaa, laakiin faannoole fari kama qodna.
Intaa waxaa dheer, waana la fahmi karaa sababta uu wasiirka koowaad u qaaday tallaabadan adag; waa la QUUDHSADAY. Waa waxa luuqadda qalaad lagu yidhaahdo ‘insubordination’. Madaxduna aad bay uga dubtaan in sidaa loola dhaqmo, tani laakiin Rooble loollan adag bay gelinaysaa, waayo ammarkiisu waddanka ma wada gaadhsiisna. Sidee buu, marka, uga lug baxayaa?
Gunaanadkii, waa u hanbalyeeynayaa wasiirka koowaad, oo qaaday tallaabo loo baahnaa oo la wada sugayey, laakiin faannoole fari kama qodna. Waa MADAXWEYNAHA mandaqadda SSC, oo mar walba caddaaladda & maamul wanaaga ka hadla.
Waxaan aaminsanahay in raiswasaruhu uu xukunkiisa gaarsiin karo Tafayasha wadanka oo dhan hadii uu umada ka helo kalsooni. Tilaabada uu hada qaaday waxay kor u qaaday kalsoonidii ay umadu u haysey xukumadiisa. Somaliaya waxay tilaabo hor ugu qaadi weydey kalsooni la’aan ay dadweynuhu ka qabaan xukumadahii isdaba joogey ilaa iyo 1991. Xukumad aan kalasooni ka haysan dadweynaha ma heli kadho ixtiraam iyo taggero baahsan oo ay wadanka oo idil ka amariso. Bal yaad u talin hadii xukumadaada laga didayo oo loo arko abris wax raamsanaya.
Resulwasare rooble wixii
Qalad ah waa inuu diidaa
Tankale shacabka somalia
Waxay rabaan waxa kasta oo
Cawinkaro, axmed madoobe
Iyo dani iyo dhamaan jaajuusinta
Waxaakale oo shacabku rabaan
Waxakasta oo taageero u ah
Waxaad modaa in uu dag dagay
Rooble why because nimanka
Uu xilka kaqaaday waxay
Cawinayaan farmaajo oo
Xaataa aduunku qiray inuu
Yahay wadani dhab ah
Hadabo roble haqaldamin
Farmaajo ha kahor imaan
Adiga oo fulinaayo danaha
Umadow kale, kashaqee in uu
Umada usonoqdo farmaajo
Waxa kudortay farmaajo
Adigoo nairobi maqayadaha
Fadhiyo, taariikh samee
Geelle Farah says:
Waakaa caqliga reer Farmaajo, sharciga waxaa kala sarreeya soo noqoshada Farmaajo, waxaa isku kay qaban waayey, Somali baan rabaa, midnimo baan rabnaa, sharciga in Farmaajo loo jebiyo oo dastuurka lavtuuro oo doorashada la boobo , sidee isu qabadsiin, yuu marka sidaa la yeelo uu xukumayaa, halkee xukumaya, caqliga nabar iyo naxdin wa sidaa
Gorgor vs Dameer says:
Dameer malab ku raro ama xaar ku raro waa uun dameer.
Hawiye ama suur ha gashto ama sida awawgiis futomadoobe kaymaha ha or-ordo asago qaawan, weligiis Hawiye waa dameer liita aan caqli lahayn.
Dameer Hawiye Hutu Futumadoobe
@Mohamed Alu waa qaldan tahay sx wixii dhaqan xun waa in dalka laga qabtaa.
@Geelle Farah waa isku dhex yaacsan tahay.Wixii qaldan waa qaldan yihiin.
Aan ku weydiiyee dad loo diido guryahooda ama lasoo tarxiili Kulane Jiis uma horeyn maxaa loofa hadli waayay 6 sanno ayay Kismaayo ka jirtas arrintaas.Somalida cadaaladda maba taqaan.